Calendar 2014 “Farm” Kalenda - Imewe Mmewe
Kalenda Ngwa ọrụ ugbo nke mpempe akwụkwọ Farm dị mfe iji chịkọta. Ọ dịghị gluu ma ọ bụ mkpa. Kpoo ya site na ime ka ihe jikọrọ ya na otu akara. Anụmanụ ọ bụla ga-abụ kalenda ọnwa abụọ. Designskpụrụ dị mma nwere ikike ịgbanwe oghere ma gbanwee obi ndị ọrụ ya. Ha na-enye nkasi obi nke ịhụ, ijide na iji ya. Ejiri ha dị ka ike na-eju anya na ihe ịtụnanya, na-enye ohere sara mbara. Emebere ngwaahịa anyị mbụ site na iji echiche nke Ndụ nwere imebe.
Aha oru ngo : Calendar 2014 “Farm”, Aha ndị na-emepụta ya : Katsumi Tamura, Aha onye ahịa : good morning inc..
Kalenda Katsumi Tamura Calendar 2014 “Farm”